CHIEF DỊKA AHA NZE N’ỌZỌ – hoo!haa!!
Ndị ígwê, ígwê ígwê nụ. Ndị nze na ọzọ, okpu m eruo ala. Nke onye chiri ya zere. Igbo bụ enyi.
Nze na ozọ dị ùgwù, nze na ọzọ bu ùgwù, nze na ọzọ bụkwa ùgwù ndị Igbo.
IGBO CHIWERE ỌZỌ KA MGBE ERI!
Anụ amaghị etu e si abọ bụ anụ egbubeghị mbụ.
Echichi nze na ọzọ bụ onye zuo ma ruo ogo ya n’ala Igbo e chie ya n’ihi na ọ bụ ugo gbuzue ọ chake. Ọ naghị eme na mberede, ihe onye ruru ogo ya abụghị ụsa.
Mana onye amaghị na ọ ga-echi ọzọ chie ọ gbara eriri ọzọ ya n’ikpere.
Ọ bụ gịnị meziri ọtụtụ ndị Igbo ji akpọdo aha ọzọ anyị n’obe dịka ịza High Chief na Chief? Onye ga-akọwara m ihe ‘Chief’ pụtara. Kedụ ebe anyị si wee ñụta ya? Anyị bidoro na ‘Chief’, ugbu a anyị enwela ‘High CHIEF’ mgbe adịghị anya anyị ga-enwekwa ‘Majestic Chief.’
Ọzọkwa, gịnị mere ndị Igbo jiri bido tinyewe 1 n’aha ọzọ ha?
“Ndị Nnewi ekene m, afa ụnụ dị ụsọ.” Ihe ụwa jiri mara ndị Nnewi bụ na ha kpatara ego. Mana ihe e kwesịrị i ji mara ụnụ abụghị naanị maka ego. O nwere ọdịnala dịgasị mma ndị Nnewi na-eme kwesịrị nñomi n’ala Igbo gburugburu dị ka aha ọzọ.
Naanị na Nnewi ka m anụbeghị ebe ha chiri ọzọ na-aza aha dịka Chief Ikemba 1(nke izizi) of Nnewi, Ọchịrịọzụọ 1(nke izizi) of Nnewi. Mba! Ndị Nnewi enweghị nke izizi na nke abụọ n’aha ọzọ ha. E tuo onye Nnewi aha ọzọ ya ị mara ebe o si maka na ọ na-ada ụda. Ị ma atụ, Ikemba Nnewi, Ọkpụzụ Nnewi, Ide Nnewi, Ebubechukwuzọ Nnewi, Ọtabirionyenwanne Nnewi (😉) wdg. Ha enweghị 1 na 2.
Nnewi ma ntọnala! Ọ bụghị onye kwuo ọbọnte ya efuo. E jighị ugegbe elele ihe a gba n’aka. Ihe e megburu mma bụ nwa mma ka a na-akpọ ya. O ruola mgbe ndị Igbo ga-ahazi onwe ha ma hizikwuo ámâ ha. Osisi e ji ama atụ adịghị mma iji akọ ọnụ.
Obodo ọ bụla dị n’ala Igbo nwere ihe ha na-echi, ya ka ha kwesịrị ịgbakwunye n’aha ha dị ka DIM CHUKWUEMEKA ỌDỤMEGWU OJUKWU, IKEMBA NNEWI. Ị hụkwara ụdịrị ugwu aha bu!
Ọtụtụ ndị Igbo so hụ uru ọ bara isi otu a na-aza aha ọzọ. Nna anyị úkwú bụ Nnia Nwodo, ihe anyị jiri mara ya bụ IKE UKEHE. Kpọm. Arịrịọ m bụ ka o wepụ Chief zawa Ọzọ ma ọ bụ ihe ndị Ukehe na-echi.
Ana m arịọ ka ndị na-etinye 1 n’aha ọzọ ha biko wepụ ya n’ihi na ọzọ anaghị enwe nke 2, ọ bụrụgodị na o nwere nke 2, mara na ọ bụ a hụ nwa e cheta nna. Okwu obodo kwekọrịtara ọnụ wee kwu bụ Ọhakwe. Onye obodo ya chiri ọzọ ekwesịghị ịtụ égwù maka onye ọzọ iwere aha ọzọ ya, òké anaghị eri ihe mụ anya. Ihe dị otu a ga-eme ka anyị mata aha ndị abụghị nke ezigbo. Ọha nwe obodo, obodo nwere ọha o wee bụrụ ọhaobodo.
Ọzọkwa bụ ka anyị biko hapụrụ ndị mba ọzọ Chief na High Chief. Ọzọ dị ùgwù! Ọzọ bụ ùgwù ndị Igbo. Obodo ọ bụla dị n’ala Igbo nwere aha ha ji echi ọzọ. Anyị nwere nze nwee ọzọ. Lekwa mgbakwunye aha ọzọ dị iche iche n’ala Igbo; NZE, ỌZỌ, OGBUEFI, OGBUECHI, EZIKE, DIM, ICHIE, DARA, DUNU wdg. Jụọ ndị okenye be ụnụ ma ọ bụrụ na ị maghị.
O ruola mgbe anyị bụ Igbo ga-eji otu olu na-ekwu. Ọhakwe!
Igbo enweghị Chief, ihe Igbo nwere bụ nze na ọzọ.
Agbụrụ, asụsụ na omenala Igbo ga-adị
©️ Emeka E. Agbaka 2018
Mazị Emeka E. Agbaka
bụ nwa-afọ Igbo bi na Jamani
Previous Post: ỤMỤANỤ ỤLỌ (DOMESTIC ANIMALS)
Next Post: AGWỌ, MBE N’AKPỊ